चारवटा प्रदेशको पहिलो ऐतिहासिक प्रदेशसभा बैठक सकियो
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो ऐतिहासिक संघीय संसद्को बैठक आइतबार प्रदेश २, ५, ६ र ७ मा बसेको छ । केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेशमा तोकेको अस्थायी केन्द्रमा पहिलो ऐतिहासिक संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको हो । आजको बैठकले चारवटै प्रदेशमा सभामुख चयनका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । आजको बैठकमा सांसद्हरुले शुभकामना मन्तव्य...
हेटौंडा संसदमा को बन्ला मुख्यमन्त्री ? यस्तो छ डोरमणिको सम्भावना !
मकवानपुर । प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य मन्त्री को बन्ला भन्नेमा चासो भइरहेका बेला मकवानपुरका डोरमणि पौडेलको नाम पनि यतिबेला चर्चामा छ । ज्येष्ठ सदस्य भएका कारण सभामुखको जिम्मेवारी पाएका पौडेलको पनि मुख्य मन्त्रीमा आकांक्षा रहेपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा यो प्रदेशमा तीन जनाको दाबी देखिएको हो । सुरुमा अष्टलक्ष्मी शाक्यकोे सम्भावना रहेको...
माओवादी केन्द्रमा यस्ता छन् मुख्यमन्त्री र सभामुखका आकांक्षी ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि एमाले र माओवादी केन्द्रले ५६ सिटमध्ये ४३ सिटमा संयुक्त उमेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकार गठनको लागि गठित संयुक्त कार्यदलले एमालेलाई २९ र माओवादी केन्द्रलाई १४ सिट हुनेगरी बाँडफाँड गरेको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन यही माघ २४ गते हुँदैछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँगै प्रदेश सरकार गठन...
काठमाडौ । सहिद दिवसको अवसरमा ‘देशको राजनीति शुद्ध पार्ने’ भन्दै कांग्रेस नेताहरुले सडकमा बसेर जुत्ता पालिस गरेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसका नेताहरुले यो अभियान चलाएका हुन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानको आयोजनामा ‘राजनीति शुद्धीकरण अभियान’ अन्तर्गत सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सो क्रममा कांग्रेस...
सहिद दिवसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले के भने ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहीद दिवसका अवसरमा नेपाली नागरिकका नाममा विज्ञप्तिमार्फत शहीदको बलिदानी र त्यागको फलस्वरुप प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लागिपर्न भनेका छन् । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा उनको भनाई छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा शहादत...
ओली भन्छन्, ‘हामीलाई युग हाँक्ने जिम्मेवारी छ ।’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक हाँक्नका लागि आफूहरुलाई जनताले नयाँ जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । नेता ओलीले सहिद दिवसका अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जनताले अहिले वाम गठबन्धनलाई नयाँ युगको अभिाभारा दिएको बताए । उनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा साथ र सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह पनि...
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीबिच यस्तो बरियताक्रम !
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत समेटेर नयाँ वरियताक्रम तोकेको छ । बैठकले विशिष्ट व्यक्तिदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्मको मर्यादाक्रम तोकेको हो । यसअघि निर्धारण गरिएका वरियता क्रममा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरुलाई समेटिएको थिएन । बैठकले राष्ट्रपति,...
एमाले र माओवादीले सभामुख र मुख्यमन्त्री पदमा यसरी गरे भागबन्डा
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यदलले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ । कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको मुख्यमन्त्री रहने भन्ने विषयमा आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकले टुंगो लगाएको नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशको १, ३, ४ र ५ मा एमालेका मुख्यमन्त्री रहनेछन् भने ६ र ७ मा माओवादीको...